'Lesi Isikhathi Sokusebenza | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 23, 2011 NgoLwesibili, Novemba 22, 2011 Douglas Karr
Sisanda kuthumela thumela imikhuba emihle ye-imeyili yesikhathi samaholide, i-infographic eneseluleko esivela kwaDelivra, an imeyili marketing inkampani. XobniIthuluzi lokukhiqiza elipholile kakhulu, likhiphe lokhu i-infographic ecindezelayo ukuthi bangaki kithi abazosebenza futhi babheke ne-imeyili ngamaholide.
Inani eliphezulu lama-79% labantu abadala abasebenza e-US bathi thola i-imeyili yomsebenzi ngamaholide wendabuko afana ne-Thanksgiving, iHanukkah, uKhisimusi, njll .; futhi ama-68% ane-imeyili avunyelwe ukuyihlola. Ukusuka Study
Ngokudabukisayo, ama-41% abantu abavumile ukuthi babheke ama-imeyili ngoba bakholelwa ukuthi ukwenza njalo kuzokwehlisa umthwalo womsebenzi uma sebebuyile "ekhefini". Hmmm ... Ngicabanga ukuthi lokho njalo ngeSonto kusihlwa kimi.
Ngakho-ke uma ufuna ukuzwakala, mhlawumbe i-imeyili ephuma ngeholide iba sethubeni elingcono lokuvulwa! Qaphela, kepha… ama-37% abantu okwaxoxwa nabo bavumile ukuthi bazizwa ucasukile, ukhungathekile noma uthukuthele ngemuva kokuthola ama-imeyili ahlobene nomsebenzi ngamaholide. Ngiyakwazi lokhu - ungathumeli eyodwa kimi! 🙂
Sifinyelele Kanjani Ekubukeni Kwezinyanga eziyi-100,000